पाकिस्तान मा देखाईयो नेपाली झन्डा एक एक सियर गर्नुहोस (भिडियो सहित)
हाल एति बेला सामाजिक सन्जाल मा निकै नै भाईरल भएको भिडियो बाहिरिएको छ । हामिले त्यो भिडियो मा पनि देख्न सकिन्छ । पाकिस्तान मा हाम्रो प्यारो नेपाल को झन्डा फरफराई रहेको छ । एउटा सानो हाम्रो देश तर सबै को प्यारो देश नेपाल सानो देखि ठूलो सम्म देश को बिच मा रहेको हाम्रो प्यारो देश नेपाल सुन्दा पनि गर्भ लाह्छ । एति बेला भारत ले नेपाल को सिमाना मिचिरहँदा पाकिस्तानमा नेपाली झन्डा फरफराई रहेको हामिले भिडियो मा देख्न सकिन्छ । र एहि भारत ले नेपाल को सिमाना मिचेको बारे नेपाल मा पनि बिरोध भएको छ ।
जताततै एस्तै बिरोध गर्दै हिडिरहेका हामी समाजिक संजाल मा पनि देख्न सक्छौ । एहि बिषय लाई लिएर कलाकार हरुको पनि फेसबुक वाल मा बिरोध भएको हामी देख्न सक्छौ । नेपाली भुमीमा भारती नक्सामा कसरी आयो ? के कारणले आयो ? कालापानीको अब समाया कसरी समाधान होला ? सबैको ध्यान तेता तिर केन्द्रीत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि ले सबैको समर्थन जुटाउनको लागि साँच्चिकै सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ । सबै पोल्टिगल पाटीको देशको नागरीकको सबै तर तर्काको समर्थन प्रधानमन्त्री लाई छ ।
तपाईं मन मा पाकिस्तान मा नेपाली झन्डा कसरी आयो ? किन नेपाली झन्डा फरफराई ? नेपाली झन्डा देखाउनु को अर्थ के भन्ने जस्ता धेरै कुरा खेल्छन होला हामिले यो भिडियो फेसबुक बाट लिईएका हौउ हामिलाई पनि हाम्रो देश को झन्डा बाहिर को देश मा देखाउद गर्भ लाग्छ । हरेक देश ले हाम्रो देश नेपाल लाई सपोर्ट गर्नु एकदम राम्रो कुरा हो । यो भिडियो हेरिसकेपछी सक्दो सियर गरेर हरेक देश बिदेश को कुना कुना मा पुर्याउनुहोला । हेर्नुहोस भिडियो ।